ပရောဖကျ – အားလုံးမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေ! – တေလာ Lopes ツဘလော့
(1) ဝင်ရောက်ခွင့် http://taylorlopes.com/util/profeta
(2) အဖြေကို စတင်ရိုက်ပါ။ (အဖြေအစား အခြားစာသားပေါ်လာပါမည်။)
(3) အဖြေကိုအဆုံးသတ်ရန်နှင့် သင်ချန်ထားခဲ့သည့်ဝါကျကို အပြီးသတ်ရန် ENTER တစ်ခုကို ထည့်သွင်းပါ။, သင်၏မေးခွန်းနှင့်အတူ
(4) ဒုတိယ ENTER သို့မဟုတ် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ “ဖော်ထုတ်ရန်”, အဖြေကိုပြပါလိမ့်မယ်။
OBS: စာရိုက်မှားခြင်းမှရှောင်ရှားရန် အဖြေတိုတိုများပေးပါ။!
ကြာပြီ။ (1999), MS-DOS အမျိုးအစား မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော ပရိုဂရမ်တစ်ခု ရှိသည်။, ဘယ်သူက အလားတူလုပ်ခဲ့လဲ။. ကောင်းစွာ, ဂိမ်းကိုလွမ်းတယ်။, အားလပ်ရက် တစ်ရက်ကို ဖန်တီးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ “ပရောဖကျသ”, တူညီသောအဆိုပြုချက်နှင့်အတူ, ဒါပေမယ့် အခု web ပေါ်မှာ.
ဒီဇာတ်ညွှန်းကို ကြိုက်တယ်။, သင် “အနိုင်ရ” သင့်သူငယ်ချင်းများကို ထင်မြင်စေသော စွမ်းရည် “ပရောဖကျသ” အရာတွေကို တကယ်သိတယ်။.
ရိုးရှင်းပါတယ်။! ဤလိပ်စာကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပါ။ http://taylorlopes.com/util/profeta မျက်နှာပြင်ဘယ်မှာလဲ။ “ပရောဖကျသ”.
တံဆိပ်အောက်ရှိ အကွက်တွင် “ဘာသိချင်လဲ။? မေး:” သင်မေးခွန်းတစ်ခုရိုက်လိမ့်မည်။ (အဖြေသိပြီးသား မေးခွန်းတစ်ခုကို မေးရပါမယ်။). ဒါပေမယ့် သတိထားပါ။! ဒီအကြောင်းအရာရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က အခုချက်ချင်းပါပဲ။. ANSWER ကို စတင်ရိုက်သင့်ပါသည်။. အာရုံစိုက်ပြီး စိတ်ရှုပ်မခံရအောင် သတိထားပါ။, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အကွက်ထဲတွင် အခြားသော နိဒါန်းစာသားများ ပေါ်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ (သင်ရိုက်နေသော အဖြေမဟုတ်ပါ။), တမန်တော်မြတ်အား ချီးမွမ်းသကဲ့သို့၊. စာရိုက်မှားခြင်းမှရှောင်ရှားရန် အဖြေတိုတိုများပေးပါ။!
ဖမ်းယူနားဆင်နေပါ! ပြီးတာနဲ့ အဖြေကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ။, ENTER တစ်ခုပေးပါ။. ဤပထမ ENTER သည် သင်အဖြေကို ရိုက်ထည့်လိုက်သည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်။. အဖြေက ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ “အဖုံးများအောက်တွင်” နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် ပြသပါမည်။. အဲဒီကနေ၊ စာကြောင်းကို ချန်ထားခဲ့တဲ့ နေရာကို ဖြည့်ပြီး သင်ရိုက်ပြီးသား အဖြေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ကျန်မေးခွန်းတွေကို ဖန်တီးပါ။. ဒုတိယ ENTER သို့မဟုတ် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ “ဖော်ထုတ်ရန်”, အဖြေကိုပြပါလိမ့်မယ်။, တမန်တော်မြတ် မှန်းဆထားသလိုပါပဲ။.
နိဒါန်းစာကြောင်းများသည် စာသားများဖြစ်သည်။ “ဖုံးကွယ်” သင့်အဖြေ. အခြားစကား, အဖြေကို သင်ဘယ်လောက် စရိုက်ပါသလဲ။, ၎င်းတို့သည် စခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်လာသော အရာများဖြစ်သည်။… သတိရရင်, အဖြေ၏အဆုံးကို အမှတ်အသားပြုပြီး သင်ချန်ထားခဲ့သည့် စာကြောင်းကို အပြီးသတ်ရန် ENTER ကိုနှိပ်ပါ။, ထို့နောက် သင်၏မေးခွန်းကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပါ။. လက်ရှိသုံးနေသော စကားစုများသည် ဤအရာများဖြစ်သည်။:
ကြိုးစားပါ။… မည်သည့်အကြံပြုချက်ကိုမဆိုကြိုဆိုပါသည်။, ပျော်ရွှင်စရာအချိန်ဖြစ်ပါစေ!
စုစုပေါင်း access: 9435
8 ဇန္နဝါရီလ 2010 တေလာ Lopes	ဘာလို့ထင်လဲ, နောက်တာပါ, ပျော်စရာ, ပရောဖက်
6 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “ပရောဖကျ – အားလုံးမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေ!”
Gustavo Turecke ကပြောပါတယ်:
စကားပြောပါ အဆွေ, နေကောင်းလား?
ဒီ DOS ပရိုဂရမ်လေးကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်။…. ထိုမှတပါး, မင်းအိမ်မှာ ငါမင်းရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။, 'guesser' အစီအစဉ်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါ. ပြီးတော့ ငါ အဲဒါကို မှတ်မိတယ်။, ထိုအချိန်မှာ, HTML ကို / Java Script သည် အထင်ကြီးလောက်စရာ သတင်းဖြစ်သည်။.
ကဲ, အချိန်ကုန်သွားပြီ, ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လေ၏။, ငါပြောနိုင်ပါတယ်။, အကောင်းဆုံး ပရိုဂရမ်မာတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ / စျေးကွက်ထဲမှာ လေ့လာသုံးသပ်သူတွေ သိပါတယ်။. သူက ကုဒ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်က နည်းပညာလောကကို ရင်ဆိုင်ဖို့ လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သူပါ။.
လမ်း, အဲဒီအချိန်တွေကို လွမ်းတယ်။, မင်းဆီက, သင့်မိသားစုမှ, မဆုတ်မနစ် အစမ်းလေ့ကျင့်ခဲ့ကြသော နေ့လည်ခင်းများ, ချာ့ချ်တီးဝိုင်းမှာ အတူတူတီးတဲ့အခါ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဖို့ အမြဲကြိုးစားနေပါတယ်။.
Blog မှ ဂုဏ်ယူပါသည်။, ကောင်းတယ်.
T က +
21 ဇန္နဝါရီလ 2010 သို့ 10:00
ဖိုး, ရဲဘော်, စကားလုံးတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။… ဒါပေမယ့် ဇာတ်ညွှန်းနဲ့ ဂီတထဲက သားရဲက မင်းပဲ။, ရုပ်ဖျက်ဖို့ မကြိုးစားနဲ့ :: D
Dani နှင့် မင်းအတွက် ဆုမွန်ကောင်းများ… Curitiba မှာ အချင်းချင်းတွေ့တယ်။. ပွေ့ဖက်!
26 ဇန္နဝါရီလ 2010 သို့ 22:09
အရမ်းကြိုက်ပြီး အရမ်းမိုက်တယ်။ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2010 သို့ 19:14
မင်္ဂလာပါ, ဤပရိုဂရမ်ဟောင်းကို pascal သို့မဟုတ် c++ တွင်ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်းရှိမရှိသိချင်ပါသည်။. ဒါတွေကို သင်ယူနေတယ်။2ဘာသာစကားတွေနဲ့ ဒီဂိမ်းကို အရမ်းသတိရချင်ခဲ့တယ်။! သူနဲ့တွေ့တယ်။ 1999 အရမ်းကောင်းတယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်။! မင်းမှာ အဲဒါ ဒါမှမဟုတ် ဇာတ်ညွှန်းတစ်ခုခုအတွက်လား။2ဘာသာစကားများကို သင်မျှဝေနိုင်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်ကို အီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါသည်။, ငါအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်နေမယ်။.
ငါ မင်းကို မေးဖို့ ဒီအခွင့်အရေးကို ယူတယ်။: သင့်စာမျက်နှာ၏ .js ဖိုင်ကို pascal သို့မဟုတ် c++ သို့ ပြောင်းရန် ဖြစ်နိုင်သည်။?
Page ကို စောင့်မျှော်လျက် ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
7 အောက်တိုဘာလ 2015 သို့ 10:20
သငျသညျ DOS ကိုအတွက်က executable သေးကယ်တင်ပြီ?
29 မတ်လ 2019 သို့ 14:24
ကံမကောင်းစွာပဲကျွန်မရှိသည်မဟုတ်, အချိန်အောင် :(
22 မေ 2019 သို့ 19:32
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.468.499 ဝင်ရောက်ခွင့်